'अफगानिस्तान युद्ध एक हप्तामा जित्न सक्छौं, एक करोड मानिस मार्न चाहदैनौं !' - राष्ट्रपति ट्रम्प - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एजेन्सी । लगभग १८ वर्षदेखि तालिवानसँग चल्दै आएको युद्ध सम्झौता मार्फत समाप्त गर्न चाहना राख्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत सोमबार आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन गर्दै नयाँपन देखाएका छन् ।
अफगानिस्तानमा दिर्घकालिन शान्तिको लागि पाकिस्तानको सहयोगलाई प्रशंसा गर्दै भनेका छन्, “हामीले चाहेको खण्डमा वा अधिक शक्तिको प्रयोग गरेको खण्डमा अफगानिस्तानको संघर्ष केवल एक हप्तामा समाप्त गर्न सक्नेछौं । त्यसो गर्दा अफगानिस्तान संसारको नक्साबाट गायब हुनेछ। साथै करोड मानिसहरु मारिनेछन् । हाम त्यो चाहदैनौं।”
सन् १९९० को दशकमा सोभियत रुसका सैनिकहरु फिर्तीसँगै सत्तामा पुगेको तालिवानलाई सुरुवाती समयमा पाकिस्तानको ठुलो समर्थन रहेको थियो । अमेरिकी सैनिकहरुले अफगानिस्तानमा प्रवेश गर्दै तालिवानलाई सत्ताच्युत गरेसँगै बदलिएको राजीनितिक वातावरणले पनि अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना हुन् सकेन ।
विगतको रसिया समर्थित कम्युनिष्ट राष्ट्रपति डा. नजी बुल्लाह मारीएसँगै अन्तहीन गृहयुद्धमा फसेको अफगानिस्तान तालिवानको उदयसँगै अमेरिकाको टाउको दुखाई बन्न पुग्यो । रब्बानी, जनरल दोस्तम, गुलबुद्दीन हिकमतियारको सत्ता लिप्साको कारण मच्चिएको सत्ता संघर्षको फाइदा तालिवानले उठाउँदा अमेरिकी सेनाको अफगानिस्तान प्रवेश निकै महँगो हुन् पुग्यो ।
राष्ट्रपति हमिद कारजाईको कार्यकाल समाप्तिसँगै अबदुल्लाह अबदुल्लाह र असरफ घानीबीच सृजना भएको राजनीतिक शक्ति संघर्षले अफगानिस्तानको राजनीतिमा नयाँ मोड लिन पुग्यो । पछिल्लो समय पाकिस्तानको सहयोगमा अफगानिस्तान राष्ट्रपति घानीसँग अमेरिकाले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न पहल गरेसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘बडी ल्यांग्वेज’मा परिवर्तन आएको छ । हतियारबाटै अफगानिस्तानको समस्या समाधान गर्ने अमेरिकी सोचमा परिवर्तन आएको महसुस राष्ट्रपति ट्रम्पले एक करोड मानिस मार्न नचाहेको अभिव्यक्तिसँगै नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ ।
आगामी सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने अफगानिस्तानको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनभन्दा अगावै अमेरिका तालिवानसँग राजनीतिक सम्झौता गर्न दबाब दिन चाहन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्प अफगानिस्तान युद्धलाई छिटो भन्दा छिटो समाप्त गर्न चाहन्छन् ताकी अमेरिकी सेनाहरु सम्मानपूर्वक अमेरिका फिर्ता लैजान सकियोस् । वार्तालाई कडा ढंगबाट उठाए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले चेतावनी दिन भने भुलेका छैनन्, ” हामीले चाहेको खण्डमा युद्ध सिर्फ एक हप्तामा जित्ने छौं ।”
एजेन्सी । चीन कोरोना भाइरससँग संघर्षरत छ । यसैबीच ...